I-EA021 - I-Alarm Floor Mat Alarm Yasekhaya [Ukuvimbela Ukuwa Kwasebekhulile] - $ 550 - Izixazululo ze-OMG
Lolu hlelo lokuqapha phansi lwazisa umnakekeli lapho isiguli siphuma noma sizama ukushiya embhedeni noma egumbini labo. Iphuma ne-sensor rubor sensor eqinile efakwe emaphethelweni ne-alamu evimbela ukujikijela ngaphezulu nangaphansi kanye ne-alamu yokuxhumana nenzwa. I-alamu yethu yokunakekelwa kwabadala kulula ukuyifaka futhi ingashukumiseleka ukufeza izidingo ezulazulayo.
I-OMG Weight-Sensing Floor Mat Sensor Pad ixwayisa umnakekeli wemisebenzi yomhlali ngokudonsela ukuqapha kokuwa lapho abahlali begxambukela phansi. I-alamu izosayina ngama-lbs amancane 1-1 / 2. ingcindezi. Ingasetshenziswa eceleni kombhede noma emnyango.
Amashidi okuphuma okuqashwe njengendlela elula yokusebenzisa indawo ehlanganisa ukuzwa izinsimbi ezingenayo wireless ezithumela izimpawu kwiyunithi. Ukuqashwa, umnakekeli uyangena kuphela ekubhekeni kwesisindo somzimba esibhekene nesisindo esimweni sokuqapha, esingabekwa emgodini wesiguli noma emnyango wesigodi sokunakekela izingane okudingeka uhlolwe.
Ngokushesha lapho isiguli sithatha isisindo sokuzwa isisindo, ixwayisa umnakekeli nge-pager wireless. Lesi yisisombululo esingabizi kakhulu esiphelele ezindaweni zokuhlala ezizimele noma kunoma iyiphi inkumbulo yokunakekelwa noma isifo se-dementia. Ezinye zalezi zitshalo eziphansi zikhona ukuze zithengwe ngaphambi kokuhlelwa ku-pager njengoba kudingeka. Amakamelo amaningi kanye / noma iziguli zingalindelwa ngokuthula nge-pagers eyodwa noma amaningi. Lolu hlelo lungasebenza futhi nabaqaphi bendawo, ama-pagers, amafoni, amahholo ocingweni oluphuthumayo, njll.
I-EA021 ye-wireless Fall Monitor ihlala ikhombisa ukuthi isinali liyatholakala kusukela ku-sensor pad futhi uhlelo luhle kakhulu. Uma isiginali yezinzwa iphukile noma ingaphandle kwebanga, qapha ama-alamu bese ukhombisa isinaliji.
Azikho izintambo phakathi kwamapads nabaqaphi - nciphisa izingozi zokuphamba futhi ususe izintambo eziphukile noma ezibunjiwe.
Isaziso seLost Sign Pad elahlekile - Izaziso umnakekeli uma uxhumano phakathi kwenzwa pad nokuqapha iba unqanyuliwe.
Ukusetha Okungakhethwa: Umnakekeli okhiye angafaka kabusha isihenqo nge-Patents, Caregiver Key ™ i-Tamperproofs eyiqapha.
Akukho switch engavikelekile: Umnakekeli angakhohlwa ukuvula emuva
Isebenza ngombhede ongenantambo noma isihlalo sezinzwa, amamaki phansi angenantambo, kanye ne-infrared Motion Sensor.
Nansi indlela abasebenza ngayo:
Imizamo yesineke yokuzulazula isuka embhedeni noma egumbini
I-alamu iqala kanye lapho isiguli singena mat
I-alamu iyaqhubeka izwakala kuze kube yilapho umnakekeli esetha kabusha
Kungasethwa ukuthi kuthule kuzwakala endaweni ekude
Ibekwe endaweni ephumayo engaphandle noma emnyango ekhishini, le alamu ne-mat duo zizokwazisa umnakekeli ukuthi isiguli sizama ukufinyelela endaweni engenamkhawulo lapho ingahambelani. Ngobuchwepheshe obungenantambo lokhu kuvumela inakekeli ukuthi inakekele ukufakwa kophiko lwe-alamu, noma ngabe ifakwe odongeni oluseduze, noma ifihlwe eduze kwetafula.
Ukubuka okuphelele kwe-9400 Ukubuka kwe-4 Namuhla